Jiro avaratra, inona ireo ary aiza no ahitantsika azy ireo | Vaovao momba ny dia
Jiro avaratra, inona ireo ary aiza no ahitantsika azy ireo?
Susana Garcia | | Tsangatsangana
Tadiavo ny jiro avaratra mifono mistery sy majika Nofinofin'ny olona maro izany. Saika ny rehetra no mahalala fa any amin'ny faritra avaratra no misy azy ireo, saingy tsy ny olona rehetra no mahalala ny antony hitrangan'izy ireo sy ny antony ahitana azy ireo amin'ny toerana sasany. Mahatalanjona tokoa ny hatsaran-tarehiny ary mahafaly ny maro tokoa ka nahatonga azy io ho lasa mahasarika mpizahatany any amin'ny firenena sasany, miaraka amin'ny fitsangatsanganana sy fitsangatsangana izay kasaina handeha hitady ireo tranga voajanahary ireo.
Raha tianao ny manonofy fitsangatsanganana samihafa izay niainana, ny fahitana ny Jiro Avaratra dia ho iray amin'ireo fitsangatsanganana miavaka ireo. Izany no antony tsara handraisanao ny toerana tsara indrindra hahitana azy ireo ary ny fotoana tsara indrindra hanaovana izany. Mazava ho azy fa capricious ny natiora, ary imbetsaka izy ireo dia tsy miseho ao anatin'ny herinandro na dia eo aza isika isan'alina, saingy misy volana maromaro azo inoana ny fahitana azy ireo.
1 Inona avy ireo hazavana avaratra
2 Toerana hijerena ireo Jiro Avaratra
3 Mikarakara ny dia
Inona avy ireo hazavana avaratra
Ireo jiro avaratra dia azo fantarina amin'ireto jiro manimba ireto, toy ny setroka miloko izay miparitaka manerana ny lanitra. Fantantsika rehetra izy ireo, saingy vitsy amintsika no mahalala ny antony hitrangan'izany. Ny tena izy dia valin'ny fiampitana ny sombin'ny masoandro amin'ny sosona ambony amin'ny atmosfera. Ity rivotra avy any masoandro ity dia mifandona amin'ny sahan'andriamby eto an-tany ary manakaiky ny Poloney, izay ahitàna ireo aurora.
Rivotra avy amin'ny masoandro miditra amin'ny rivotra iainana ambony mamoaka angovo sy mamoaka jiro misy loko isan-karazany. Ireo jiro ireo no fantatra amin'ny anarana hoe Jiro Avaratra. Na dia mihevitra ny rehetra aza fa maitso izy ireo dia ireo no be mpampiasa indrindra, fa ny tena marina dia azo atao ny mahita azy ireo amin'ny alokaloka hafa. Misy auroras izay mety manomboka amin'ny loko mena ka hatramin'ny manga ary volomparasy.
Ny fizahan-tany an'io tranga voajanahary io dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izy ireo koa dia fantatra amin'ny hoe 'Jiro Avaratra' na jiro avaratra, amin'ny fomba fiteny maro kokoa. Raha te hanana fahafahana mahita azy ireo isika dia tsy maintsy mandeha ara-dalàna mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina, indrindra rehefa mazava ny andro ary mangatsiaka. Miankina amin'ny toerana, misy volana maromaro izay inoana kokoa, noho izany dia mila mampahafantatra tsara ny tenantsika alohan'ny handehanana hihaza sy hisambotra ireo aurora.
Toerana hijerena ireo Jiro Avaratra
Betsaka ny toerana ahitanao ireo fisehoan'ny rivotra avy amin'ny masoandro eny amin'ny faravodilanitra ireo. Azo antoka fa ny faritry Norvezy, izay tena akaiky ny faribolana Arctic, no iray amin'ireo matetika matetika. Amin'ny faramparan'ny fararano sy ny ririnina dia rehefa betsaka ny azo atao, amin'ny volana Oktobra sy Febroary. Ny ora tsara indrindra dia manomboka amin'ny enina tolakandro ka hatramin'ny iray maraina. Raha tsy te hahita zavatra iray ianao, dia azonao atao aza ny misintona rindrambaiko finday antsoina hoe 'Jiro Norvezy'.
La Lapland Finnish Ity dia toerana iray hafa ankafizin'ireo lanitra ireo. Eto amin'ity firenena ity dia misy angano iray milaza fa ny auroras dia bara-by novokarin'ny rambon'ny amboahaolo rehefa niampita ny lembalemban'ny arctic izy. Ny faritra misy azy ireo matetika dia any amin'ny tanàna avaratra, toa an'i Kilpisjärni sy Inari. Sodankylä dia tranon'ny National Northern Lights Observatory, izay mahatonga azy io ho toerana mahaliana haleha. Tokony ho ao an-tsaina ihany koa fa tsara kokoa ny misafidy faritra tsy misy loto maloto, toy ny Luusto Natural Park.
Groenlandy toerana hahitana azy ireo koa izany. Eto dia misy angano Eskimo izay milaza fa ireo jiro ireo dia fanahin'ny zazakely any an-danitra. Ny Greenland atsimo dia malaza amin'ny fahita matetika sy ny hamafin'ny tafio-drivotra amin'ny masoandro. I Islandy ihany koa dia toerana iray hafa hitsidihana azy ireo, ary ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny faran'ny volana Aogositra sy ny tapatapaky ny volana aprily.
Mikarakara ny dia
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia misy toerana vitsivitsy izay ahitanao ireo aurora ireo. Na izany aza, ny sasany manana ny tsy fetezana avo indrindra. Raha te hahita azy ireo amin'ny famirapiratany rehetra ianao dia tsara kokoa ny mandeha any amin'ny iray amin'ireo fitsangatsanganana voalaminaSatria fantatry ny mpitari-dalana ny toerana tsara indrindra hahitana azy ireo ary voalamina tanteraka ny dia. Raha ny mahazatra, ireo dia ireo dia mitaky mandany alina any amin'ny cabine miorina amin'ny toerana lavitra, mba hahitana tsara kokoa ny lanitra. Ny sasany dia misy fandroana mafana sy spa any ivelany mba hahafahanao mijery azy ireo amin'ny toerana malalaka.
ny volana ririnina izy ireo no ho tsara indrindra mahita azy ireo, ka amin'izay ianao tsy maintsy mandamina ny zava-drehetra. Ho fanampin'izany, zava-dehibe ny ahafahana mandeha mandritra ny herinandro farafahakeliny, satria tsy miseho matetika ireo aorora afaka andro vitsivitsy, miankina amin'ny tafiodrivotra amin'ny masoandro sy ny toetr'andro izany, mba hananantsika antoka bebe kokoa raha ny amin'ny fahitana ity fizahana voajanahary mahavariana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Jiro avaratra, inona ireo ary aiza no ahitantsika azy ireo?
Ekosy sy ny tanànany